Uhuru Kenyatta oo lagu wado in maanta loogu dhawaaqo Madaxweynha 5aad ee Kenya | RBC Radio
Uhuru Kenyatta oo lagu wado in maanta loogu dhawaaqo Madaxweynha 5aad ee Kenya
Posted on August 11, 2017 Raad Raaca, RBC, Wararka
Qaar ka mid ah shaqaalaha madaxtooyada ayaa la arkayay iyagoo keenaya kursiga madaxweynaha uu ku fariisanayo, iyadoo ilaalalada madaxweynaha ay goobta timid xilli hore.
Nairobi (RBC Radio) Guddiga Doorashooyinka Kenya ayaa maanta oo Jimce ah wada diyaargarowgii ugu danbeeyay ee ay ugu dhawaaqayaan natiijada rasmiga ee doorashooyinka guud ee dalka Kenya ka dhacday Talaadadii.
Ilo wareed ayaa sheegaya in guddigu ay go’aansadeen in natiijada ku dhawaaqisteeda iyo ku dhawaaqista madaxweynaha guuleystay inay maanta duhurkii ay wada shaacin doonaan.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo illaa hadda ku horreeya doorashada ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo inuu yahay madaxweynaha 5aad ee Jamhuuriyadda Kenya.
Dhaqdhaqaaq xoog leh oo loogu diyaargaroobayo xaflada ku dhawaaqista madaxweynaha ayaa haatan ka socota xarunta guddiga doorashooyinka ee Bomas ee magaalada Nairobi.
Qaar ka mid ah shaqaalaha madaxtooyada ayaa la arkayay iyagoo keenaya kursiga madaxweynaha uu ku fariisanayo, iyadoo ilaalalada madaxweynaha ay goobta timid xilli hore. Amniga ayaa aad loo adkeeyay agagaarka xarunta Bomas iyo guud ahaan caasimada Nairobi.
Shir jaraa’id oo xalay uu qabtay Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati ayuu ku sheegay in waraaqaha lagu diiwaangaliyay natiijada doorashada ee tirintooda ay ka socotay xarunta guddiga ee Bomas ee ku taalla Nairobi ay dhammaad ku dhow yihiin.
Dalka Kenya ayaa ka kooban 290 degmo, iyadoo guddiga uu hadda tiriyay illaa 270 degmo natiijadii ka timid.
UHURU vs ODINGA
Illaa hadda waxaa natiijada hordhaca ee guddigu soo bandhigay ku horreeya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo heysta codad kor u dhaafay 8 milyan, halka musharraxa ku soo xiga oo ah musharaxa mucaraadka Raila Odinga uu heysto illaa 6 milyan.
Hase yeeshee Mr. Odinga ayaa diidan natiijadda hadda bannaanka taalla. Waxaana Odinga uu sheeganayaaa in codadka uu xisbigiisu tirsaday ay yihiin 8.4 milyan halka uu dalbaday in isaga madaxweyne loogu dhawaaqo, taasoo Guudiga Doorashada uu diiday.
Dadweynaha ayaa cabsi iyo dhega taag ku sugaya natiijada doorashada in lagu dhawaaqo. Waxaa maalintii saddexaad xiran ganacsiyada iyadoo gaadiidka dadweynaha uu gaabis yahay caasimada Nairobi, halka magaalooyinka qaar ay ka dheceen rabshado maalmihii la soo dhaafay.
Cabsida ugu weyn ayaa ah sida taageerayaasha Raila Odinga u aqbali karaan haddii Guddiga Doorashooyinku ku dhawaaqaan in madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashada, iyadoo dadku xusuusan yihiin rabshadihii dad ka badan 1,400 ku dhinteen ee ka dhacay dalka 2007 markaasoo doorashooyinka guud lagu murmay.